I-Admitir Graf Spee - iMfazwe Yehlabathi II - iKriegsmarine
Imbali kunye neNkcubeko Iimfazwe zeNavy
I-Admiral Graf Spee - Uhlolo-nkcazelo:
Uhlobo: I -cruise enkulu / "i-Pocket Battleship"
Umkhombe: Reichsmarinewerft, uWilhelmshaven
Ukukhutshwa phantsi: Oktobha 1, 1932
Kwaqaliswa: Juni 30, 1934
Ukumiselwa: uJanuwari 6, 1936
Isohlwayo: Ixutywe ngoDisemba 17, 1939
I-Admitir Graf Spee - Iinkcukacha
Ukufuduswa: iitani ezili-14,890
Ubude: 610 ft., 3 in.
I-Draft: 24 ft. 1 in.
Ukukhawuleza: 29.5 amaqhina
Ukuzalisekisa: amadoda angama-951-1.070
I-Admiral Graf Spee - Amandla
Izibhamu (njengoko zakhiwe)
6 × 28 cm (11 in.) SK SK / 28 (2 x 3)
8 × 15 cm (5.9 in.) SK SK / 28
8 × 53.3 cm (21 in.) I-torpedo tubes
I-Admiral Speech Spee - Uyilo kunye noKwakhiwa:
I- Deutschland -lasslass panzerschiffe (umkhumbi wezobukhosi), uyilo lwe- Admiral Graf Spee lujoliswe ekukhetheni ngokuvisisana nemingcele yemigodi ebekwe yiSivumelwano saseVersailles esaphelisa iMfazwe Yehlabathi I. Le mijelo yempi yeJamani ezayo eya kwiitoni ezili-10 000. Nangona iinqanawa ze- Deutschland -class zidlulile kule ndawo, abaqulunqi baseJamani baceba iindlela ezininzi zokunciphisa ubunzima. Ezi ziquka ukubandakanywa kwe-diesel kunye nokusetyenziswa kwe-welding enkulu. Ingalo yeklastiki ejoliswe kwiimfubhane ezi-11-intshi ezi-11 zifakwe kwiirhubhe ezimbini. Ngenxa yoko, iinqanawa ze- Deutschland -iklasi zaziyokwazi ukuhlaselwa ngokukhawuleza naphezu kobukhulu babo obukhulu. Ngenxa yoko, baba nolwazi kwezinye iinqanawa njenge "iinqwelo zokulwa." Unamandla okujikeleza ama-knots angama-28, bakwazi ukuphuma-izixhobo ezininzi zeemfazwe zangaphandle ezazikhawuleza ngokwaneleyo ukuba zibambe.
Ukuhlaselwa eReichsmarinewerft eWilhelmshaven ngo-Oktobha 1, 1932, i-panzerschiffe entsha yabizwa ngokuba yi- Vice Admiral Maximilian Reichsgraf von Spee owawunqobile iBrithani eCoronel ngoNovemba 1, 1914, ngaphambi kokuba abulawe kwi- Battle of the Falklands ngenyanga. Eqalwe ngoJuni 30, ngo-1934, inqanawa yaxhaswa yintombi yommihla yokugqibela.
Umsebenzi uqhubekile kwi- Admiral Graf Spee kwenye iinyanga ezilishumi elinesibhozo. Ukumiselwa ngoJanuwari 6, 1936, kunye noCaptain Conrad Patzig, umqhubi omtsha wathatha ininzi yabasebenzi bayo kwi- Braunschweig yakudala yemfazwe. Ukusuka eWilhelmshaven, i- Admiral Graf Spee yachitha inxalenye yokuqala yonyaka yokuqhuba iimvavanyo zolwandle. Ekugqityiweni kwabo, kwakunikwe iiflethi yeJamani yamaJamani.
I-Admiral Speech Spee - Prewar Operations:
Ngokuqhambuka kweMfazwe Yesizwe yaseSpain ngoJulayi 1936, i- Admiral Graf Spee yangena e-Atlantic Ocean kwaye yaqalisa ukulandelelanisa ukungenelela kwinqanawa yaseSpain. Emva kokuqhuba iipatroli ezintathu kwiinyanga ezilishumi ezizayo, umqhubi wangena eSpithead ngasekupheleni kukaMeyi 1937 ukuba athathe inxaxheba kwiCoronation Review ye-King George VI. Ekugqibeleni kwemibhiyozo, u- Admiral Graf Spee wabuyela eSpeyin apho wawukhupha umnqanawa walo udade,. Ukubuyela ekhaya ngasekupheleni konyaka, uthathe inxaxheba kwiindlela zokuhamba ngeenqwelo-moya kwaye wenza umnxeba wokunceda eSweden. Ukulandela ukulandelwa kokugqibela okungengeniso lokungenelela ekuqaleni kwe-1938, umyalelo wenqanawa udluliselwe kuCaptain Hans Langsdorff ngo-Oktobha. Ukuqalisa uchungechunge lwezihlandlo zokuthabatha i-Atlantic, i- Admiral Graf Spee nayo yabonakala ekuhlaziyweni kwamanxweme ngokuhlonipha i-Hungarian regent uAmiral Miklós Horthy.
Emva kokutyelela kwizibuko zasePortugal ekupheleni konyaka ka-1939, loo nqanawa yabuyela eWilhelmshaven.
Intetho ye-Admiral Graf - iMfazwe yehlabathi II iqala:
Ukulindele ukuqala kweMfazwe Yehlabathi II , inkokeli yaseJamani u-Adolf Hitler yalela i- Admiral Graf Spee ukuba ihambe ngomkhumbi i-South Atlantic ukuba ikwazi ukuhlasela ukuthunyelwa kwe-Allied. Ukushiya uWilhelmshaven ngo-Agasti 21, uLangsdorff waya e-South waza wabuyiselwa ngeenqanawa zakhe, Altmark, ngoSeptemba 1. Waziswa ngokuqala kweentlanzi, waxelwa ukuba alandele ngokungqongqo umgaqo-mali xa ehlasela iinqanawa zorhwebo. Oku kufuna ukuba i-raider ifune iinqanawa zezinto zokulwa phambi kokuba zicwilise kwaye ziqiniseke ukhuseleko lwabadlali. Ngomhla kaSeptemba 11, enye yeenqwelomoya ze- Admiral Graf Spee yabona i-cruise cruise uHMS Cumberland . Ukuphunyuka ngempumelelo umkhombe waseBrithani, uLandsdorff wathola imiyalelo ngoSeptemba 26 eyalathisa ukuba aqalise iphulo lokurhweba ekuhambiseni ukuthunyelwa kwe-Allied.
NgoSeptemba ka-30, i-floatplane ye-cruiser yatshona i-steamer Clement . Ukuqinisekisa ukhuseleko lwabaqeqeshi, uLangsdorff wasasaza izikhulu zamabutho aseBrazil waza wabaxelela ngokuhlaselwa. Ukwaziswa phambi kobuhlanga baseJamani kwi-South Atlantic iRoyal ne-French Navies yakha amaqela asibhozo aqulethwe ngabathwali abane, iinqwelo ezimbini zokulwa, i-battlecruiser enye kunye nabanqwelwana abalishumi elinesibhozo ukuzingela eLangsdorff.
I-Admiral Graf Spee - Raiding:
Ngo-Oktobha 5, i- Admiral Graf Spee yathabatha iNewton Beach kunye neentsuku ezimbini kamva yatshisa i- Ashlea . Nangona okokuqala kwakusetyenziselwa ukuthuthwa kwezithunjiweyo, kwabonakala kuphuculwa kwaye kwangoko kwalahlwa. Ukuthatha iHuntsman ngo-Oktobha 10, uLangsdorff wagcina i-steamer kwaye wayithatha i- Altmark ngeveki kamva. Ukutshintshisa amabanjwa ukuya kwindawo yakhe yokuthunyelwa, wathumela uHuttsman . Emva kokucima iTrvanion ngo-Oktobha 22, uLangsdorff wayekhokele uLwandle lwamaNdiya ngenzame yokudibanisa abo bafuna. Ukucima itanki Afrika i-Shell ngo-Novemba 15, i- Admiral Graf Spee yajika i-Atlantic ukuze ikhuphe i- Altmark . Ngoxa kwakubonakala ngoNovemba 26, abasebenzi bee-cruiser benza imizamo yokutshintsha i-silhouette ngokuklama i-turret kunye ne-funnel.
Ukuqhubeka nomkhankaso wakhe, uLangsdorff wagxotha umnqweno weDoric Star ngoDisemba 2. Ekuhambeni kokuhlaselwa, umkhumbi we-Allied wakwazi ukufikelela kwi-radiyo ukuze uncedo kwaye ubuyiselwe isikhundla sakhe. Ukufumanisa oku, iKomodore Henry Harwood, eyalela iRoyal Navy's Force G, yaqondisa uMlambo Plate kulindeleke ukuba le ndawo ibe yijoliso elilandelayo lika- Admiral Graf Spee .
Umyalelo kaHarwood wawuquka i-cruise ye-HMS Exeter kunye nabaqhubi be-HMS Ajax (i-flagship) kunye ne-HMS Achilles . Kwakhona kuWarwood kwakuyiCumberland elalikhungula kwiiItland zaseFalkland. Ukucwina kweDoric Star kwandelwa ngokukhawuleza ngokuhlaselwa kwinqanawa yefriji yaseTairoa . Ukudibana kunye ne- Altmark ngoDisemba 6, uLangsdorff wagxotha umnqwelana uStraonshalh ngosuku olulandelayo. Ebhodini, amadoda akhe athola ulwazi lokuthunyelwa kwezinto ezamkhokelela ekubeni athathe isigqibo sokuba ahambe nxamnye noMlambo wePlate.
I-Admitir Graf Spee - iMfazwe yoMlambo i-Plate:
NgoDisemba 13, i- Admiral Graf Spee yabona i-masts kwi-bowboard. Ngoxa uLangsdorff wayekholelwa okokuqala ukuba yi-convoy ihambise ingxelo ngokukhawuleza yamxelela ukuba yayisisigqeba saseBrithani. Ukunyulwa ukuba alwe, wayala umkhombe wakhe ukuba ufikelele ngokukhawuleza kwaye uvale intshaba. Oku kubonakalisa ukungaphumeleli njengokuba i- Admiral Graf Spee yayimile kwaye yanyunyuza iinqwelo zemfazwe zaseBrithani ezinemigodi eyi-11 intshi. Esikhundleni saloo ndlela, umqhubi waletha i-cruiser phakathi kwe-8 intshi ye- Exeter kunye nezibhamu ezi-6 intshi. Ngeendlela zentshaba, iHarwood yaqalisa isicwangciso sokulwa esabiza u- Exeter ukuba ahlasele ngokwahlukileyo ukusuka kubanqabileyo abanobuchule benomnqweno wokuwaphula umlilo kaLangsdorff. Nge-6:18 AM, i- Admiral Graf Spee yavula i- Battle of the Plate River ngokudubula kwi- Exeter kunye nezibhamu zayo eziphambili ngenkxaso yayo yesibili ijoliswe ku- Ajax ne- Achilles .
Ngesiqingatha esilandelayo, iinqanawa zaseJamani zenza ukuba i- Exeter ikhubaza zombini i-turrets yayo kunye nokuqala imililo emininzi.
Ngenxa yoko, i-cruiser yaseBrithani yatshitshisa inkqubo ye- Admiral Graf Spee yokufakelwa kwamafutha ngegobolondo le-8 intshi. Nangona iinqanawa zakhe zabonakala zingekho phantsi, ukulahlekelwa kwenkqubo yokucoca i-fuel limited Langsdorff ukuya kwiiyure ezilishumi elinesibhozo zokusetyenziswa kwamanzi. Ukunceda abantu basekhaya baseBrithani, abahamba ngeendlela ezivakalayo bavala i- Admiral Graf Spee . Ukucinga ukuba iinqanawa zaseBrithani zenza i-torpedo kuhlaselwa, uLangsdorff wajika. Amacala amabini aqhubeka nokulwa de nge-7: 25 ekuseni xa isenzo sagqiba. Ukukhupha, uHarwood wanquma ukuthungela umkhombe waseJamani ngenjongo yokuhlaselwa kwakhona emva kobumnyama.
I-Admiral Graf Spee - I-Scuttling:
Ukungena entlango, uLangsdorff wenza iphutha lezopolitiko ekumanyeleni eMontvideo ngaphandle kwe-Uruguay ngaphandle kweyomhlobo waseMar del Plata, e-Argentina kwizantsi. Ukubeka emva kobusuku phakathi kobusuku ngoDisemba 14, uLangsdorff wabuya wabuhlungu waza wabuza urhulumente waseUruguay ezimbini kwiiveki ukuba enze ukulungiswa. Oku kwachaswa ngumdibanisi waseBrithani u-Eugen Millington-Drake owakhankanya ukuba phantsi kwe-13 Hague Convention Admiral Graf Spee kufuneka ikhutshwe emanzini angathathi hlangothi emva kweeyure ezingamashumi amabini anesine. Ecebisa ukuba iimithombo ezimbalwa ezihamba ngeendawo zihlala kuloo ndawo, iMillington-Drake yaqhubeka icinezela ukuba ikhefu lixoshwe esidlangalaleni ngelixa abantu baseBrithani beza kwenza ukuba iinqanawa zaseBrithani naseFransi zihambe ngeeyure ezimashumi mabini anesine.
Le nyathelo ibandakanye isiGaba se-16 sendibano esathi "Imfazwe yemfazwe engenakuthi ingashiyi ichweba elingathathi hlangothi okanye i-roadstead de kube ngamashumi amabini anesine emva kwekhefu lomthengisi ehamba ngeflegi yomchasi wayo." Ngenxa yoko, la majelo aphethe i- Admiral Graf Spee ngelixa kwakunezinye iimbutho zamanxweme. Ngelixa uLangsdorff ecela ixesha lokulungisa iinqanawa zakhe, wafumana iintlobo zeengqondi zobuxoki eziphakamisa ukufika kweMandla H, kubandakanywa nomphathi we- HMS ye- Ark Royal kunye ne-battlecruiser HMS. Nangona i-force egxile kwiReown yayisendleleni, empeleni uHarwood yayisomelezwa yiCumberland . Ukukhohliswa ngokupheleleyo kwaye akakwazi ukulungisa i- Admiral Graf Spee , uLangsdorff waxoxa ngokukhetha kwakhe kunye nabaphathi bakhe eJamani. Inqatshelwe ukuvumela ukuba iinqanawa ziqhutywe yi-Uruguay kunye nokukholelwa ukuba intshabalalo ethile eyayilindelwe elwandle, yalela ukuba i- Admiral Graf Spee yaxubusha kwi-Plate yoMlambo ngoDisemba 17. Esi sigqibo samcaphukisa uHitler owawuthetha ukuba zonke iinqanawa zaseJamani zalwa isiphelo. Kuthathwe eBuenos Aires, eArgentina kunye nabasebenzi, uLangsdorff wazibulala ngoDisemba 19.
Speedychiffe Admiral Graf Spee
Umkhosi wamaJamani: I- Admiral Graf Spee
Langsdorff weGraf Spee
Imfazwe Yehlabathi II: USS Illinois (BB-65)
Imfazwe yaseMerika: ICSS Virginia
I-Top 10 Country Songs for Mothers
Oko Okufuneka Ukwazi Ngaphambi Kokufunda iHukam
6 I-Oscar Snubs yamaFree Minority
Iingxaki zeF Ford Mustang zokuPhathwa